Sadio Mane Oo Islaamnimadiisa Iyo Siduu Ugu Dhaqmo Quruxdeeda – Gaaladii Ku Ammaantay
HomeAfricaSadio Mane Oo Islaamnimadiisa Iyo Siduu Ugu Dhaqmo Quruxdeeda – Gaaladii Ku Ammaantay
Sadio Mane ayaa si sharafi ku jirto kursiga si dhacadiid ah ugu fadhiistay isagoo dhoola cadaynaya. Waa shaqsi aad ugu ad-adag diinta uu haysto ee Islaamka – kubadda cagtana, laf dhabar iyo tiir dhexaad aan laga maarmi karin kaga jira. ” Sidaas waxaa lagu bilaabay, war qoraal ah iyo waraysi uu boggiisa hore, caddadkii saaka ( Axad ) ku daabacay wargeyska – Daily Mail.
Wargeysku, wuxuu ku sifeeyey, nin dhalinyaro ah oo ka soo jeeda qoys diinta Islaamka haysta kuna faana, waxaanay weydiiyeen, bal sida ay waalidkii ula dhaqmi jireen, markii uu yaraa ” Siday doonaan ha uga jeedaan su’aasha eh, ama macnaha ay doonaan haka damacsanaadeene, waxaa ka biyeeyey, wiilka reer Senegal oo intuu ku qoslay, si fudud ugu jawaabay . ‘Waa muslimiin,’ , isagoo dhoola cadaynta sii watana wuxuu u raaciyey, ‘Sidaas darteed, hab dhaqankoodu waa mid ku taxaluqa diin ku suntan akhlaaq.’
Mane waa shaqsi si aad ah uga caan ah garoonka tabobarka naadiga Liverpool ee Melwood training ground. Wuxuu saaxiib la yahay shaqsi kasta oo naadiga ka tirsan, waxaanu caan ku yahay oo ay wada qirsan yihiin, qof deggen, oo saamayn baaxad leh ku dhex leh dadka uu la nool yahay. Haddii qaar kamid ah ciyaaryahanada ka ciyaara horyaalka Ingiriiska ee Premier League ku soo marti qaadaan xaflad loogu qaabeeyey sida shaqsiyaadka caanka ah iyo dadka qaniga ah, Mane isaga maaha tiisa oo dhag uma jalaqsiiyo.
Wuxuu ku koray tuulada yar ee Bambali, oo dhacda koonfurta wadanka Senegal, halkaas oo aabihii ka yahay Imaamka Masaajidka deegaanka. Mar uu wariye reer Senegal ahi booqday halkaas bishii ina dhaaftay, Waxaa loo xaqiijiyey in Mane, uu maalmo dhawayd uun soo bixiyey kharashkii lagu dayac tiray dibna loogu qurxiyey Masaajidka aabihii Tujiyo.
Waxaa kale oo loo sheegay, in Mane, uu sida ciyaaryahanno badan oo caan ah isla markaana Afrikaan ah, uu lacago badan dib ugu soo diro wadankiisa, mashaariic badana ka hir galiyey, qaarkoodna ay socdaan kuwaas oo uu ku caawinayo, shacabka wadankiisa.
Arimo badan ayuukaga duwan yahay, ciyaaryahanada kale ee horyaalka Premier League, sida uu isagu afkiisa uga sheekayna waxaa kamid ah hadaladiisii.
‘Ma taabto khamriga iyo maandooriyaha,’ ayuu Mane yidhi, isagoo dhex fadhiya xafiis ku dhex yaala xerada Melwood.
‘Diintaydu aniga muhiim bay ii tahay. Waan ixtiraamaa, qawaaniinta Islaamka, shanta wakhtina mar walba waan tukadaa.
‘Senegal boqolkiiba 90 waa wadan shacabkiisu Muslim yihiin, waxaana laga yaabaa in 10 boqolkiiba ay yihiin Kiristaan, laakiin dadku waa shacab wada nool oo ku wada dhaqma is ixtiraam, iyo saaxiibtinimo. Aniga saaxiibkaygii ugu wanaagsanaa wuxuu ahaa, Luke, wuxuu haystay diinta Masiixiga, midkaayaba ka kale guriga ayuu ku soo booqan jiray .
‘Ma jiro mushkilad diimeed oo dhex taalaa, xaqiiqduna waxay tahay, inaan jeclaa ciyaarista kubadda cagta. Waxaan ku soo koray, akhlaaq wanaagsan, iyo jidka toosan, waalidkayna, waxay ku faanaan inaan ahay ciyaaryahan ku xamaasha mihnada kubbada cagta. Wali waxay ku nool yihiin tuuladii aan ku soo koray, laakiin Guri ayaan ku leeyahay caasimada Dakar, sidaas darteed, haddii ay doonaan way deggi karaan gurigaas kuna noolaan karaan, waana arin u furan oo doonistooda uun ku xidhan.
‘Arimaha aan horumarka ku gaadhay waxaa kamid ah, inaan ilaa yaraantaydii ku dedaali jiray inaan tacabkayga dib u galiyo, dalkayga iyo gaar ahaan gobolka aan ku dhashay. Waan la xaajoodaa oo sheekaysanaa asxaabtaydii Senegal.’
Tartanka FIBA AfroBasket 2017 Oo Dhaqaale Badan Uga Soo Xaroodeen Magalooyinka Tunis iyo Dakar
18/09/2017 Cabdirisaaq Maxamuud Caalin
Caqabadaha Haysta Dhanka Farsamadda Tartanka Koobka FIBA AfroBasket 2017 Ee Ka Furmay Senegal & Tunisia
10/09/2017 Cabdirisaaq Maxamuud Caalin
Mane: Liverpool wey garaaci doontaa Manchester United